မြန်မာအခြေခံလူတန်းစားတွေဆီသို့ ယန်းသန်း ၄၀၀ ကျော် အစားအစာများထောက်ပံ့ပေးမယ့် ဂျပန်အစိုးရ - JAPO Japanese News
မြန်မာအခြေခံလူတန်းစားတွေဆီသို့ ယန်းသန်း ၄၀၀ ကျော် အစားအစာများထောက်ပံ့ပေးမယ့် ဂျပန်အစိုးရ
ကြာ 20 May 2021, 9:15 မနက်
ဂျပန်အစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းမှုအတွင်း ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများအပြင်းအထန်ရရှိခဲ့တဲ့ဒေသရှိ ပြည်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ကာ ခန့်မှန်းချေ ယန်းသန်း ၄၀၀ တန်ဖိုးရှိ အစားအသောက်‌ထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ Motegi ဟာ “ အနိမ့်ဆုံးလက်လုပ်လက်စားဘဝမှာပင် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းရှိပြည်သူတွေကိုအဓိကထားပြီး WFP (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂ အစားအသောက်ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဥ်) ကနေတစ်ဆင့် ဒေါ်လာ ၄ သန်းနဲ့ညီမျှသော၊ ယန်း ၄၃၂ သန်းတန်ဖိုးရှိ အစားအသောက်ထောက်ပံ့မှု ပြုလုပ်သွားမယ်” လို့ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောချက်အရ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ယခုနှစ် ၂ လပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့သော အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဥ်နောက်ပိုင်း၊ အထူးသဖြင့် အခြေခံလူတန်းစားပြည်သူတွေအကြား အစားအသောက်မလုံလောက်မှုဟာ လျင်မြန်စွာပဲကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ ယခုတစ်ခေါက်ဂျပန်အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုဟာ ခန့်မှန်းချေ လူပေါင်း ၆ သိန်းစာအတွက် အစားအသောက်များလုံလောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ထောက်ပံ့မည့်ငွေကြေးဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရဆီသို့မဟုတ်ဘဲ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကနေတစ်ဆင့်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး၊ ယခုလအတွင်းပြည်သူလူထုဆီသို့ အစားအစာများထောက်ပံ့သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဂျပန်သတင်းဌာန တင်ပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။
ကူးစက်မှုအထွတ်အထိပ်ရောက်နေပြီဟု အစိုးရဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်တားဆီးရေး ဆပ်ကော်မတီ ပြောပြီ !!!
(၅) ရက်နေ့ ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ၂၄၉၇ ဦးရှိ၊ သေဆုံးသူ ၁၃ ဦးရှိ
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ဂျပန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဟာ ကျောင်းသားများကို အစားအစာများကူညီပေးခဲ့
ရေနံကိုပဲစုပ်ယူတဲ့ ဂျပန်ထုတ်ပစ္စည်း မော်ရေးရှပ်စ်သို့ ပို့ဆောင်မည် !!!!